Myanmar Youth Media Club - non-iPhone
MYMC radio ကို Iphone/Itouch တင်မဟုတ်ပဲ ယခု nokia နဲ့ sony ericsson ပေါ်မှာ နားထောင်လို့ရပါပြီ။
Important: Unless you have unlimited data bundles or flat fee subscriptions, streaming via 3G network would probably be very (very) expensive.သတိပြုရန်။ ။ ဤနည်းဖြင့် ရေဒီယိုကို 3G network တွင်နားထောင်ပါက သင့်တွင် Unlimited Data Bundles (သို့မဟုတ်) Flat Fee Subscriptions မရှိလျှင် Phone ခအလွန်ကျနိုင်ပါသည်။
1) Go to www.moodio.fm/user/register.၁။ www.moodio.fm/user/register ကို သွားပါ။2) Fill out basic user information such as username, an email address (you needavalid one to set your password later on), and so forth.၂။ user ရဲ့ နာမည်၊ email address အစရှိတဲ့ အချက်အလက်များကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။3) For the best experience, set bitrate/channel setting to 32 Kbps, stereo, as shown.၃။ အောက်ပါပုံထဲကအတိုင်း bitrate/channel setting ကို 32 Kbps, stereo အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
4) Immediately after creating the account, you’ll receiveaconfirmation email to validate your account and change the password.၄။ account အသစ်လုပ်ပြီးသွားလျှင် သင့် account ကို confirm လုပ်တဲ့ email တစ်စောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
5) Click on the confirmation link to open upanew page that’ll let you reset your password.၅။ confirmation link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ စာမျက်နှာမှာ default password ကို သင်နှစ်သက်ရာ password အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
6) Click Log in, change your password and click Save at the bottom.၆။ Log in ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် password ကို ပြောင်းပြီး အောက်မှာရှိတဲ့ Save ကို နှိပ်ပါ။
7) Click Stations on the left panel and you will see the user prompts as followed.၇။ ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Stations ကို နှိပ်ပါ။ user prompt တွေကို အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
8) Type Myanmar Youth Media Club Radio in the name field and click Apply.၈။ Name အကွက်ထဲမှာ Myanmar Youth Media Club Radio လို့ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Apply ကိုနှိပ်ပါ။
9) When you see MYMC Radio as shown below, click add.၉။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Myanmar Youth Media Club Radio တွေ့ရင် Add ကိုနှိပ်ပါ။
10) Once you have successfully added, you will see Myanmar Youth Media Club Radio under My Stations, on the right panel.၁၀။ ညာဖက်က My Stations အောက်မှာ Myanmar Youth Media Club Radio ဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
11) Now, you’re done with configurations on your PC, so let’s go to your mobile.၁၁။ အခုဆိုရင် Computer မှာ Account configuration လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။ Phone မှာ ဆက်လုပ်ရမဲ့ဟာလေးတွေ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
12) On your mobile, open web browser and go to http://m.moodio.fm (Note: This link won’t work on your PC browser.)၁၂။ Phone က Web Browser မှာ http://m.moodio.fm လို့ရိုက်ပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ Phone browser version ဖြစ်တဲ့အတွက်သင့် PC က Browser မှာ ဖွင့်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
13) You’ll be prompted to fill in your log in credentials.၁၃။ သင့်ရဲ့ Username နဲ့ Password ရိုက်ဖို့ အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
14) Log in and hit Myanmar Youth Media Club Radio.၁၄။ Myanmar Youth Media Club Radio ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့် username နဲ့ password ရိုက်ပြီးရင် Log in ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Myanmar Youth Media Club Radio ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
15) Your mobile media player will load up (e.g. Real Player on Nokia) and buffer (Note: You’ll hearadial tone while buffering).၁၅။ သင့် Phone မှ Media Player (ဥပမာ။ ။ Nokia phone မှာ ဆိုရင် Real Player) ပွင့်လာပြီး Buffer လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ Buffer စစလုပ်ချင်း "တီ" ဆိုပြီးကြားရပါမယ်။)
16) Listen and enjoy.၁၆။ Buffer လုပ်ပြီးတာနဲ့ အဆက်မပြတ်ရင်ခုန်စေမဲ့ Beat တွေကိုနားသောတဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tutorial by Lance (MYMC)
Translations by D3viL (MYMC)
Graphics by Vicent Lee
Content View Hits : 8591643